Ciidamada Galmudug oo xiray Ganacsade Liibaan Shuluq - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Ciidamada Galmudug oo xiray Ganacsade Liibaan Shuluq
October 9, 2017 October 9, 2017 admin455
Ciidamada Ammaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa goordhow garoonka diyaaradaha Cadaado ku xiray Ganacsade Liibaan Shuluq, ganacsadahaan ayaa ka yimid magaalada Muqdisho. wuxuu ahaa gacanta midig ee siyaasi Axmed Shariif Cali Hilowle oo dowladda federaalka ah usoo wakiilatay inuu xilka ka tuuro Madaxweynaha Galmudug.
Ganacsade Liibaan ayaa ahaa ninka xildhibaanadii riday Xaaf u qeybiyey lacagta, isagoo dhowr jeer ku laabtay Magaalada Muqdisho. Ninkan ayaa Galmudug u aragtaa mid dowladdu usoo dhiibto dhaqaalaha lagu burburinayo Maamulka. waxaana la geeyey saldhigga degmada Cadaado.
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa la adkeeyey ammaanka guud magaalada Cadaado, waxaana la arkayey ciidamada oo si xooggan u jooga wadooyinka iyo goobaha muhiimka Ah. Madaxweyne Xaaf ayaa intii uusan aadin kismaayo si adag ula dardaarmay ciidamada Ammaanka.
Sidoo kale Xalay ayey ciidamadu fashiliyeen isku day uu ku doonayey Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Barlamaanka Galmudug inuu uga baxo Madaxtooyada, iyadoo ciidamada horey amar loogu siiyey in qof masuul ah uusan gali karin ama ka bixi karin Madaxtooyada inta Madaxweynuhu deegaanka Ka maqan yahay.
Boosaaso:Al-Shabaab oo Xalay Weerararay Control Ciidan
Jeneraal Galaal iyo Madaxweyne Xaaf oo caawa Shir ku leh Cadaado